1. Ho fanomezana Indraindray dia tonga amin'ny varingarina lava izay azontsika afangaro miafina izany Ahoana ny fomba fanaovana fonosana fanomezana amin'ny valizy? Androany dia manana fomba hamoronana fahasambarana amin'ny fanomezana isika. Ary fenoy ny fahafaham-po avy amin'ny mpandray izay efa nahita ny asa-tanana sy ny fikarakarana isaky ny dingana avy amin'ny sary voalohany dia ny famonosana izay rehetra mahazo fanomezana amin'ity festival manokana ity. Jereo ny sakafo matsiro sy fikarakarana anay Fanampin'izay, rehefa vita ianao dia hahatsapa ho mirehareha izaitsizy.
2. Fitaovana taloha Fonosana fanomezana vita amin'ny varingarina
3. - Fonosana fanomezana Safidio ny mampifanaraka ny toetran'ny mpandray. Mampiasa loko sy lamina sahaza Amin'ity vanim-potoana ity dia mety mitady taratasy fibre voajanahary. Manome fahatsapana mafana sy manokana izany, tsy hafahafa izany Raha boaty misy varingarina lehibe dia mety tsy maintsy ho lehibe ny taratasy voafantina. Na ampiasao ny taratasy avy amin'ny fangaro mba hanaovana fonosana tsara tarehy. - Tsipìka na kofehy mety ho mora ny manamboatra anao na miraikitra amin'ny voninkazo maina dia mahafatifaty iray hafa. - Gunting ampiasaina hanapahana taratasy, hanapahana ny tsipìkan'ny kofehy. - Dity lakaoly mangarahara sy adhesida misy sisiny roa - boaty varingarina Azo hanaovana fanomezana amin'ny habe mety fotsiny izany Na somary lava kokoa Raha boaty fanomezana no ampiasaina handravahana ny toerana Safidio avy eo ny habe napetraka ary jereo miavaka
4. Dingana sy ny fomba famonosana fanomezana varingarina.
5. - Manomboka amin'ny fandrefesana ny taratasy manodidina ny boaty varingarina mba hifanentanana. Sady ny lafiny malalaka sy ny lavany. - aforeto tsara ny ambony sy ny ambany. - Ataovy azo antoka ny faran'ny taratasy amin'ny kasety mangarahara mifatotra amin'ilay boaty eo amin'ny sisiny. Ary nasiana kofehy indroa amin'ny ilany hafa mba tsy hahitana soritra. - Tonga eo amin'ny paiso ambony Tsoahy midina ny faran'ny taratasy Ary raikitra amin'ny kasety mangarahara. - Miezaha milomano amin'ny zoro ankavanana Ary ampiasao kasety mangarahara tsindraindray hitazomana ireo fironana izay hazonintsika ambony Ataovy ny fanenjehana mandra-pahatapitry ny faribolana. Ary ataovy ny lafiny roa
6. - Hetezo boribory ilay taratasy ary apetaho eo amboniny.
7. - Apetaho tsara eo amboniny ny kofehy - vita. Vita ny fizahana ary natolotra
8. Tsy sarotra izany Ahoana ny famonosana fanomezana amin'ny varingarina Ary afaka manome fanantenana ilay nahazo azy koa Toy izao ny endrik'ilay boaty. Inona no ho azonao? Ary amin'ny faran'ny taona Boaty fanomezana varingarina dia azo alamina. Ho haingon-trano na zoron'ny Krismasy Mba hahazoana refy fomba fijery amin'ny endrika samihafa Ampio hatsaran-tarehy sy fahasambarana indray, mora fa tsy sarotra.
9. Hanao zavatra amin'ny fitiavana sy finiavana Tsara hatrany ny valiny, asao ny zanakao hiaraka amin'ny hetsika famonosana fanomezana ho an'ny olon-tianao. Na dia tsy hivoaka ny tsara tarehy indrindra aza ny fahaiza-manao Fa fitiavana sy fiahiana Hetsika mahafinaritra ao amin'ny fianakaviana izany. Hetsika mafana iray hafa tianao tadiavinao !!